आज (बिहीबार) घट्यो कि बढ्यो सुनको भाउ ? – List Khabar
Home / आर्थिक / आज (बिहीबार) घट्यो कि बढ्यो सुनको भाउ ?
admin February 3, 2022 आर्थिक Leaveacomment 94 Views
काठमाडौँ । साताको पाँचौ दिन अर्थात आज (बिहीबार) पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ थोरै बढेको छ । बुधबार प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज बिहीबार पनि तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले नयाँपुस्ता डटकमलाई जनाएको छ ।
यस्तै, सुनको भाउ बढेपनि आज चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १ हजार २५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बुधबार पनि चाँदी प्रतितोला १ हजार २५५ रुपैयाँमा नै कारोबार भएको थियो।
Previous नेपालमा ओमिक्रोनको ‘सब भेरियन्ट’ बीए.२ ले संक्रमण फैलायो
Next पुरुषलाई महिलाको स्त’न किन यति धेरै मन पर्छ ?